Ikhaya labafundi abashintshana emtholampilo-"Igumbi likaNadia" - I-Airbnb
Ikhaya labafundi abashintshana emtholampilo-"Igumbi likaNadia"
I-Pearson Palace iyikhaya elinikezelwe kuphela kubafundi/abahlengikazi/odokotela abadinga indawo yokushintshana ngomtholampilo e-Geisinger Medical Center, e-Danville, e-PA noma ezibhedlela eziseduze nayo. Izintengo ezisuselwe kukuhlala okukodwa. Sinamagumbi okulala angu-4 esingawaqashisa anombhede ongu-1 ogcwele ekamelweni ngalinye. Sicela ubuze noma nini ukuthi sinazo yini izikhala...kungakhathaliseki ukuthi ikhalenda lingathini... sibheke ngabomvu ukukusiza.-lolu hlu olwegumbi eliboniswe esithombeni-"Igumbi likaNadia"
Uma ubhukha igumbi, uyakwazi ukungena kuyo yonke indlu ngaphandle kwamanye amagumbi okulala. Thina, singabasingathi, ASIHLALI endaweni eqashisayo kodwa siyimayela elingu-1/2 ukusuka emgwaqweni uma sidingeka kunoma yini.
Cishe imizuzu eyi-15 ukusuka epaki yokuzijabulisa yomndeni i-Knoebels e-Elysburg, PA
Cishe ngaso sonke isikhathi sitholakala ukuze sisize nganoma yiziphi izinkinga eziphathelene nendlu. Sikunikeza izinombolo zethu zomakhalekhukhwini ukuze ukwazi ukusithinta nganoma yini.